Impi Yempilo Nokufa | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-03-06 17:13:59 7
UChang Moyang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan
“Lapho ushiya inyama, ngokungegwemeke kuzokuba khona impi ngaphakathi. USathane ufuna ukuthi ulandele imicabango yenyama, ukuvikela lokho okufunwa yinyama. Nokho, intando kaNkulunkulu isakukhanyisela futhi ikukhanyise ngaphakathi, ikunyakazise ngaphakathi futhi isebenze ngaphakathi. Kuleli qophelo, kukuwe ukuthi uzolandela bani. Njalo lapho kwenziwa khona iqiniso nangaso sonke isikhathi abantu abenza ngaso ukuthanda uNkulunkulu, kuba nempi enkulu engemuva kwalokho. Ngakho njalo lapho wenza iqiniso, ekujuleni ngaphakathi kunempi yokuphila nokufa. Ukunqoba kuyonqunywa emva kokulwa okukhulu, nezinyembezi eziningi zosizi eziyochithwa ngemuva kwalokho” (“Njalo Lapho Ushiya Inyama Kuba Khona Impi yokuphila Nokufa” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ngaso sonke isikhathi lapho ngizwa amazwi kaNkulunkulu kuleli culo, ngangiye ngicabange lokhu okulandelayo: Ingabe ukwenza iqiniso ngempela kunzima? Uma abantu bengaliqondi iqiniso, abakwazi ukuliphila. Lapho sebeliqondile, ingabe ngeke na ukwenza njengokwentando kaNkulunkulu kwanele? Ingabe ngempela kubucayi njengokuthi “ekujuleni ngaphakathi kunempi yokuphila nokufa”? Kwaze kwaba kamuva, lapho ngengangidlule kukhona, ngathola ukuzwa kahle ukuthi ukwenza iqiniso akulula neze. Lokho uNkulunkulu akusho kuhambisana ncimishi neqiniso; alikho neze ihaba.
Esikhathini esidlule, ngabona sengathi udadewethu owayesebenza nami wayenokuzikhukhumeza futhi engibukela phansi; angikwazanga ukuzibamba kodwa ngaya ngokuya ngicwila esimweni esingalungile. Ngaqala ukuzibeka ezimweni ezingikhandlayo ngenxa yakhe. Ngahluleka ukungakunaki lokhu emsebenzini wami; nasekukhulumeni kwami nganginokuzithoba kulokho engikwenzayo kangangokuba, emva kwesikhathi, ngangiye ngibuke ubuso bakhe uma ngikhuluma noma uma ngenza okuthile, futhi ngangingathwele umthwalo womsebenzi wami. Ngangiphila ebumnyameni ngokuphelele. Ngangingakwazi ukuzikhipha ngisho noma ngangazi ukuthi isimo sami sasiyingozi. Phakathi kokuhlupheka, kwakukhona ukuhola kukaNkulunkulu: Khuluma nodadewenu nivulelane izifuba, nithole indlela eya ekukhanyeni. Kodwa uma ngifika phambi komnyango kadadewethu, ngafikelwa umcabango owehlukile: Uzothini udadewethu uma engizwa ngimtshela ngalokhu? Ingabe uzothi ngigcwele izinto eziningi ezingatheni engqondweni yami, athi ngiyinkinga nje, futhi ngilukhuni kakhulu ukusebenza nami? Ngithe uma ngifikelwa yilo mcabango, kwaba sengathi ngibone engibuka ngandlela thile, ngendlela enokungenyanya. Ngokushesha, isibindi sami sashabalala kanjalo ngavele ngabuna, kwaba sengathi umzimba wami wonke ubanjwe yijaqamba. Aphinda futhi amazwi kaNkulunkulu angilethela ukukhanyiseleka ngaphakathi: Uma ube nezinkinga eziningi othole kunzima ukukhuluma ngazo, kungaba nzima ukudlubulundela uphume ebumnyameni. Ingabe ungazimisela ukuqhubeka nokuphila kanjalo? Ngazama ukuzikhuthaza buthule: Yima isibindi, ungenzi izinto lukhuni futhi uvuleleke. Ukwenza iqiniso akuyona into ongazenyeza ngayo! Kodwa futhi ngaleso sikhathi, omunye umuzwa owawuphikisana nalowo walokhu ungibelesele: Ungasho lutho—abanye abantu bacabanga ukuthi awunankinga. Uma ukhuluma ngakho bazocabanga ukuthi ugcwele izinto eziningi engqondweni yakho bangabe besakuthanda. Hhayi! Kungcono ukuzithulela-ke! Ngenkathi ngithithiza nginjalo, uNkulunkulu waphinda wangihola: Ukuba ngumuntu othembekile kuchaza ukuthi akufanele ube namahloni nokwesaba! Ukukhanyisela kukaNkulunkulu kwangivuselela, kodwa okwangethusayo ukuthi ngale nkathi ngiqala ngithola amandla, amanye amacebo kaSathane aqubuka futhi: Uma ukhuluma ngakho abanye abantu bazokwazi ukuthi ungubani ngempela, emva kwalokho-ke uzohlala ulusizi! Inhliziyo yami ngokushesha yasongana. Kwaba ngale ndlela ukuba inhliziyo yami idonseleke emuva naphambili empini ephakathi kokuhle nokubi, okumnyama nokumhlophe. Ngangazi ngokucacile: Ukungafuni kwami ukukhuluma kwakuyisifiso sami sokuzivikela ngingaphoxeki. Kodwa ngale ndlela, isimo sami ngeke sisombululeke futhi kwakungenanzuzo emsebenzini wami. Ukufuna ukuxoxisana nokuhlanganyela kuphela okwakungasombulula le nkinga kuzuzise nomsebenzi wami futhi ngihambisane nentando kaNkulunkulu. Kodwa uma nje ngifikelwa yilo mcabango wokuthi uma eke wezwa, angase angithathele phansi, ngaphelelwa yisibindi sokwenza iqiniso. Ngazizwa sengathi uma ngingakhuluma ngobubi bami, ngangingeke ngisakwazi ukuqhubeka nokuphila! Okwesikhashana ngazizwa nginokuthukuthela okukhulu, futhi nenhliziyo yami yaba sebuhlungwini obukhulu kwaba sengathi ishiswa umlilo. Lokhu kwakunzima sengathi ngangibhekene nesinqumo esiphakathi kokufa nokuphila, ngavele ngaphihlika ngakhala, ukuphela kwento eyayingisalele kwakuwukuthi ngikhale ngicele usizo kuNkulunkulu enhliziyweni yami. Esikhathini esibucayi, amazwi kaNkulunkulu aphinda akhanya engqondweni yami: “Akufanele bangabi nalo iqiniso, futhi akufanele bafihle ubuzenzisi nokungalungi …. Intsha kufanele ibe nesibindi ingavumi ukucindezelwa amandla obumnyama nokuguqula ukubaluleka kokuba khona kwayo. ” (“Amazwi Aya Kwabancane Nabadala” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angivumela ukuba ekugcineni ngikwazi ukuthulisa inhliziyo yami eyaluzayo: Noma kwenzekani, ngeke ngiphinde ngibe into yokudlala uSathane! Ngeke ngiphinde ngimelane noNkulunkulu; kufanele ngilahle umina ngiphile iqiniso. Lapho sengithole isibindi sokufuna udadewethu sabe sesivulelana izifuba saxoxisana naye, akugcinanga nje ngokuba kusombululeke inkinga le, kodwa inhliziyo yami ngayizwa ilula. Lapho ngicabanga emuva empini enzima inhliziyo yami eyayibhekene nayo ngaleso sikhathi ngaphinde ngezwa ukuhlupheka kwasempini yokufa noma ukuphila, kwaba lapho kuphela lapho ngabona khona ubucayi nobuze bokufuna kwami ukungabonakali ngiyisiwula. Kwakuyingxenye yempilo yami kangangokuthi ngangiphila ebumnyameni, ngibhekene nokubiza okulandelanayo kukaNkulunkulu kodwa ngingakwazi ukuphunyuka. Ngangiliqonda iqiniso kodwa ngingakwazi ukulenza; ngempela ngase ngikhohlakaliswe ngokujulile uSathane! Ngaphinde ngakuqonda kahle ukuthi ukwenza iqiniso kanye nokuba ngumuntu othembekile akulula neze.
Kwaba ngemva kokuhlangabezana nalokhu kuphela lapho ngaqonda khona amazwi kaNkulunkulu: : “Njalo lapho kwenziwa khona iqiniso nangaso sonke isikhathi abantu abenza ngaso ukuthanda uNkulunkulu … ekujuleni ngaphakathi kunempi yokuphila nokufa.” La mazwi ashiwo ngokukhohlakala kwemvelo yomuntu ngenxa yokuthi imvelo yobusathane besintu igxile kakhulu enyameni. Umuntu uvaleleke futhi uboshwe yiyo, futhi isibe yimpilo yethu. Uma senza iqiniso, uma silahla izimpilo zethu zenyama, le ndlela iyefana nokuzalwa kabusha, njengokufa bese uyavuswa. Ngempela kungumbango nokulwela ukuphila nokufa, futhi kuyinqubo ebuhlungu ngempela. Lapho singayazi ngokwempela imvelo yethu futhi singazimisele ukuhlupheka noma ukukhokha inani, angeke sikwazi neze ukwenza iqiniso. Ngaphambilini ngangicabanga ukuthi ukwenza iqiniso kwakulula—lokhu kwakungenxa yokuthi ngangingayiqondi imvelo yokukhohlakala kwami futhi ngangingazi ukuthi kujule kangakanani ukukhohlakala kwami. Esikhathini esizayo, ngizimisele ukuzazi ngokujulile ngengidlula kukhona, ukufuna ukwenza iqiniso kuzona zonke izinto, kanye nokulahla umina!
Okwedlule: Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya
Okulandelayo: Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile